Misy farany ny fandeferana | NewsMada
Misy farany ny fandeferana
Mahari-pery ny malagasy. Tsy misy tsy vaky vava amin’ny fahasarotan’ny fiainana. Efa tena any anaty vilanin’ny mponina ny fahasahiranana. Voatohintohina ny foto-tsakafon-dRamalagasy. Vary! Tena vary ihany no mahavoky na dia efa mitobaka be aza ny karazana paty….
Tsy voavidy vola intsony anefa zany vary zany. Zara raha mahita harapaka indray mandeha isan’andro ny ankohononana iray. Tsy hita izay hosarangotina, tsy hita izay hitarainana. Manaraka am-bokony izay onjany eo.
Tsy ny vary ihany no midangana fa saika ny kojakoja ilaina andavanandro rehetra mihitsy. Tsy misy tsy mimenomenona. Ny sasany efa miteny irery eny an-dalana, mila ho lasa adala manoloana ny ngidin’ny fiainana. Miaritra eo ihany aloha.
Lafo loatra ny sakafo izay miantoka ny fahavelomana. Lafo ny saran-dalana, lafo ny vidin’ny rano hosotroina… lafo daholo ny zavatra rehetra. Ny vola enti-miaina kely dia kely miohatra amin’ny fidangan’ny vidin’entana tampoka anatin’ny andro vitsy.
Manampy trotraka ny hafanana mampanary lamba. Mampirongatra ny hadalan’ireo tsy salama saina, eny na ny hendry aza mila hiboridana. Manginy fotsiny ny haizin-kitroka lava ateraky ny delestazy isan’andro isan’andro. Tsy lazaina intsony ny tsy fandriampahalemana…. Mbola zakaina daholo ireo, hiafiana.
Te hikiaka mafy hampihatra ny fahatezerana Ramalagasy saingy mahatsiaro tena ho kely miohatra ny be ka tsy afa-manohatra. Tsy misy mpitarika mahasahy mijoro koa haneho hevitra ka mifampiandriandry.
Efa tsy rariny intsony!! Efa an-tenda ny ranom-bary na tsy ampy aza ny orana. Toa tsy mahatsapa ny fangirifirian’ny vahoaka ny mpitondra matoa mitazam-pitsony, tsy taitra, tsy mihetsika.
Misy fetrany ihany ny fiaretana. Misy farany ihany ny fandeferana. Amin’izay fotoana izay, mahavita manao sorona ny ainy ny vahoaka. Efa te hitroatra sy te hipoaka mafy fa miandry tosika sy pitik’afo kely monja.